Mpivarotra lehibe mifanohitra amin'ireo mpivarotra ratsy
Izaho irery ve no mbola tia marketing mamorona?
Zoma, Jolay 2, 2010 Alahady, Jona 21, 2015 Douglas Karr
Nandeha fiara tany amin'ny ilany Andrefana aho, nijery ny takelaka iray, ary nisy takelaka fanaovana fitaovana. Raha tokony ho doka mahazatra ny takelaka, dia hatrany amin'ny tany ihany ilay doka. Nisy sandry iray nihazakazaka ny paositra ary ny fitaovana tena izy dia teo amin'ny faritry ny takelaka. Toy ny hoe nivoaka avy tamin'ny tany ilay sandry. Raha mila marotoa aho, dia tadidiko angamba ilay marika ary angamba, ho nividy azy.
Ao amin'ny Internet, tiako ny mahazo doka mifandraika amin'izany rehefa manao fikarohana aho. Izaho dia tena mino bebe kokoa amin'ny mpanao dokambarotra manao fikarohana teny lakile mandroso, manara-maso ahy ary manome ahy dokambarotra mifandraika noho ny ataoko ao amin'ny Google manome valiny mahaliana ahy.
Tiako ny manome fampahalalana manokana an'arivony an'ny mpanao dokambarotra. Ataoko izany mba hahafantaran'izy ireo ahy bebe kokoa ary hanome ahy doka mifanaraka amin'ny demografiko. Mila doka marani-tsaina aho. Te hanana paikady marketing manan-tsaina aho. Mbola tiako ny fanaovana dokambarotra mamorona na dokambarotra mamorona izay afaka manenjika ahy, misarika ny saiko ary mampiakatra ahy ny rantsan-tànako ambonin'io totozy io.
Izaho irery ve? Miantsena saika ny zava-drehetra amin'ny Internet aho izao. Raha tsy nila namangy fivarotana hafa mihitsy aho tamin'ny fiainako dia tsy hanao izany aho. Rehefa mahita dokam-barotra aho ary vonona hividy, dia mibolisatra aminy aho. Tiako ny marketing ary tiako ny manao doka.
Mino aho fa nahazo rap ratsy ny marketing sy ny doka noho ny mpivarotra kamo. Raha tokony hanao vivery ny fahaiza-mamorona izy ireo na hanao ny fahazotoana fanampiny hampifanaraka ny tena sy ny kendrena, dia manosika azy ireo eo anoloan'ny masomaso marobe araka izay tratrany izy ireo.
Ireo mpivarotra lehibe dia afaka mamantatra ny lalana alehanao ary, raha mankany amin'ny làlan-kalehany ianao dia hitarika anao hiditra. Sahala amin'ny fanjonoana manidina… noana ny trondro ary mipoitra tampoka manodidina azy ireo hatrany ny makana. mandra-pahatongan'ny elanelan'ny manaikitra. Ireo mpivarotra mahatsiravina dia manipy ny harato fotsiny. Tsy mahazo fitarihana ampy? Harato lehibe kokoa! Mbola tsy afaka? Harato misimisy! Nosintomin'izy ireo tao ny trondro raha mbola sahirana sy misento mafy izy ireo hialana.
Ahoana ny hevitrao? Mbola mankasitraka marketing sy dokam-barotra tsara ve ianao?
Tags: takelakadokam-barotra amin'ny takelakafikarohana siantifikadokam-barotra an-tseraseraampy
Ny fitantanana ny lahasa dia mora amin'ny HiTask
WordPress: Ahoana ny fomba hanaovana Popup Video Facebox
Jul 2, 2010 amin'ny 7: 38 AM
Io no marketing tsara indrindra sy famoronana tadidiko. Mazàna aho manilika ny ambiny satria lasa manja be.
Jul 2, 2010 amin'ny 7: 48 AM
Afaka milaza am-pahatsorana aho fa tsy mankasitraka ny dokam-barotra lehibe aho, na inona na inona lasibatra. Raha ny marina, arakaraky ny iezahan'ny mpanao dokambarotra hikendry ahy no vao mainka mihemotra aho. Ny traikefa mitovy amin'izany amin'ny fampiasana vokatra Microsoft maro: miezaka mafy izy ireo hanantena ny zavatra tiako (jereo, autoformatting!), saingy tsy mahavita asa tsara izy ireo.
Toy izany koa ny dokam-barotra amin'ny marika izay tsy manandrana mandrisika ny fivarotana mivantana, fa manandrana mamorona toe-tsaina mifandray amin'ny marika. Amin'ny tsara indrindra dia tsy mandaitra, amin'ny ratsy indrindra dia mamitaka.
Amiko, manimba kokoa ny marikany ny mpanao dokambarotra rehefa manao dokambarotra izy ireo. Tsapako fa mitady hamitaka kely izy ireo. Ary amin'ny ankapobeny, heveriko fa mahatsapa toy izany koa ny ankamaroan'ny olona. Mividy vokatra amin'ny mpanao dokam-barotra amin-kitsim-po izy ireo, saingy aleony mividy amin'ny marika marina sy mangarahara kokoa rehefa misy safidy hafa.
Heveriko fa sarotra ho an'ny indostrian'ny dokam-barotra ny manaiky, saingy noho ireo fantsona sy teknolojia marobe izay natokana ho an'ny doka, dia mihena ny sandan'ny doka rehetra; na dia ny "tsara" aza.
Jul 2, 2010 amin'ny 8: 12 AM
Deckerton, fomba fijery mahafinaritra izany! Manontany tena aho anefa hoe ohatrinona ny varotra sy ny dokam-barotra izay tena ijoroanao nefa tsy fantatrao akory hoe ampitaina amin'ny fomba an-kolaka ianao!
Jolay 2, 2010 amin'ny 12:43 PM
Miaraka aminao aho ry Doug! Ankasitrahako izany rehefa mifandray amin'ny safidiko ny doka ary misarika ny saiko amin'ny fomba famoronana. Ny zava-misy dia mividy zavatra aho… ary ny dokam-barotra tsara dia manamora ny fifandraisana amin'ireo vokatra mifandraika amiko.